Rtoa A.Vesantine: nitondra fiovana ny tetikasa Fiavota | NewsMada
Rtoa A.Vesantine: nitondra fiovana ny tetikasa Fiavota
Misy ny fandaharanasa Fiavota ( midika hoe fiavotana), vatsin’ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana (Ida), sampana ao amin’ny Banky iraisam-pirenena. Mitentina 35 tapitrisa dolara izany, entina hiarovana ny fianakaviana miaina anaty fahantrana lalina. Isan’ireo olona tena marefo any amin’ny tapany atsimon’ny Nosy, tratry ny mosary (kere), miisa 450.000, nahazo vola tamin’ity Fiavota ity, Rtoa Andrianomenjanahary Vesantine, 27 taona, efa nisara-bady, manan-janaka roa. Ny taona 2013 hatramin’ny 2015, potika ny vokatra, manodidina ny iray tapitrisa ny olona tsy ampy sakafo. Nilaza i Vesantine, fa tsy nanana sakafo homena ny zanako intsony aho, nandritra ny kere.
Miisa 39 ny kaominina tena tratry ny hain-tany sy ny tsy fahampian-tsakafo. Tanjon’ny Fiavota ny hanomezana lelavola mivantana ny mponina, hiatrehany ny fiainana andavanandro, hividianana sakafo hohanina ary hampidirana an-tsekoly ny ankizy.
Mahazo 30.000 Ar isam-bolana Rtoa Vesantine (10 dolara/isambolana na 0,3 dolara isan’andro). Nambarany fa nahafahany niatrika ny fiainana io vola io ary efa mianatra any an-tsekoly ny zanany amin’izao fotoana izao.
Afaka mihinam-bary, katsaka, …
Misy koa ny fizarana sakafo sy fanofanana ny fomba fahandro sy fihinana sakafo, omen’ny Fiavota. Nilaza i May Liavatea, 30 taona, manan-janaka fito fa “tsy nihinana afa-tsy mangahazo izahay taloha, fa efa afaka mihinam-bary sy katsaka, ankehitriny, ary akoho indraindray”.
Hatramin’ny nisian’ny Fiavota, milaza ny tatitry ny Banky iraisam-pirenena fa nitombo 40% mihoatra amin’ireo tsy nisitraka ity fandaharanasa ity ny fidiram-bolan’ny ireo nahazo tombontsoa. Niakatra tarehimarika 12 koa ny tahan’ny ankizy miditra an-tsekoly, nampihena ny ankizy 5 -17 taona mandeha miasa.
Araka ny famantarana omen’ny Banky iraisam-pirenena, sokajiana ho miaina anaty fahantrana lalina ny olona mahazo vola latsaky ny 2 dolara isan’andro, na 7.400 Ar (1 dolara= 3.700 Ar). Izany hoe, mbola mifanalavitra amin’io tondro farany ambany 2 dolara io ny 10 dolara isam-bolana (0,3 dolara/isan’andro), ny omen’ny Fiavota.